Xasan Sheikh iyo C/Weli oo lala taliyey - Caasimada Online
Home Maqaalo Xasan Sheikh iyo C/Weli oo lala taliyey
Xasan Sheikh iyo C/Weli oo lala taliyey
Laba Sano ka dib lama hayo Ciidan Qaran oo dhisan oo kaligii howl gali kara haba tiro yaraadaaye,Waxaana wali halkii ka sii socda Maleeshiyooyinkii Beelaha oo lagu sheegayo Ciidanka Qalabka Sida halka wali Maleeshiyooyinka Suufiyada ay garabsocdaan Ciidankii Dowladda.May ku biiraan Ciidanka ama ay guryahooda Joogaan.!!
Labo Sano ka dib ma jirto Siyaasad cad oo ay ku socoto Dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh,Taasoo ku wajahan dhismaha Maamul Goboleedyada iyo Shirarka iska soo horjeedo,Waxa ayna isha ka daawaneysaa khilaafaadka Beelaha iyo dhismaha Maamul Goboleedyada iska soo daba dhacayo ee aad mooddo Tusbax go’ay.Dowladi sow ma’ahayn middi dadka towjiihin oo Iyada laga danbeyn jiray ?
Waxaan dhib ku qabnay Siyaasad xumidooda iyo go’aan jileecooda hadda waaba ka dareen oo waxa ay ogolaadeen in ay Ciidamada Itoobiya mar kale soo galaan dalka Iyagoo og wixii ay Itoobiya ka geysatay dalkan haday aah lahayd dil,barakicin iyo burburin hanti dadweyne,waxa ay Sidoo kalena Xasan Sheekh iyo dowladdisa iska indho tireen Xasaasiyadda ay ka qabaan Shacabka Soomaaliyeed Ciidamada Itoobiya.
Xalku waa cad yahay waxaana leeyahay Xasan Sheekh iyo Madaxda kale sida Gudoomiyaha Baarlamaanka, Sida aad wax u waddaan waxba kuma soconayaan sidaanna dal laguma hogaamiyo waayo hogaamin daleed waxa ay u baahan tahay Aragti fog,Qorshe dhameystiran iyo Istaraatiyad Sax ah.
Hadaba labo arimood mid sameeya Nimanyahow si loo badbaadiyo dalkan qarka u saran inuu u kala gogo’ gobolo yar yar oo ay maamulaan dowladaha dariska ah.
Waxaan ka codsanayaa inaan qalad la ii fahmin, Waxaan oo dhan waxa ay iga tahay in wax la saxo si dhibaatada looga baxo dadkeenana ay dalka dib ugu soo noqdaan. Wixii dhaliil ah oo aan leeyahay ha la ii sheego si aan isu saxo.